Wararka - CONVISTA Waxay Soosaartay Barxadda Barxadda Isbarbar Dhiganta ee nidaamyada dhuumaha cadaadiska sare iyo kuwa dhexe ee 600 illaa 1,000MW marawaxada uumiga ee heer sare ah (heer sare ah)
CONVISTA Waxay Soosaartay Qalabka Iskuxidhka Isbarbardhiga Isbarbar dhigga ee nidaamyada dhuumaha cadaadiska sare iyo kuwa dhexe ee 600 ilaa 1,000MW marawaxada uumiga ee heerkulka sare (aad u sarreysa)
Bishii Ogosto ee sanadka 2018, CONVISTA waxay si guul leh u soo saartay Parallel Slide Gate Valves oo loogu talagalay nidaamyada tuubbada cadaadiska sare iyo kuwa dhexe ee 600 ilaa 1,000MW marawaxada uumiga ee heer sare ah.
1.It waxay qaadataa qaab dhismeedka is-daboolida cadaadiska, oo leh isku xirnaan xiriir leh labada dhinacba.
Waxay qaadataa waalka korantada ee korontada laga soo galo iyo ka soo baxa si loo dheellitiro cadaadiska kala duwan ee laga soo galo.
3. Farsamadiisa xidhitaanku waxay qaadataa qaab-dhismeedka laba-shaashadda isbarbar socda. Dareemida waalka waxay ka timaaddaa cadaadiska dhexdhexaadka ah halkii laga saari lahaa xoog jireed farsamo si looga ilaaliyo waalka inuu ku dhaco xiisad khatar ah inta lagu jiro furitaanka iyo xiritaanka.
4. Iyada oo alxanka iskudhafka adag ee ku saleysan cobalt-ka, wejiga shaabadu uu leeyahay caabbinta heerkulka sare, caabbinta daxalka, iska caabinta abrasionka, nolosha adeegga dheer iyo astaamo kale
5. Maritaanka daaweynta ka-hortagga iyo daaweynta nitrogenization, dusha sare ee dusha sare ee qalabka ayaa leh caabbinta daxalka wanaagsan, caabbinta abrasion iyo sanduuqa wax lagu kalsoonaan karo.
6. Waxay la jaan qaadi kartaa aaladaha korontada ee kala duwan ee gudaha iyo kuwa la soo dhoofiyo si loo buuxiyo shuruudaha xakamaynta DCS loona ogaado hawlgallada fog iyo kuwa gudaha.
7. Waxaa si buuxda loo furi doonaa ama la xidhi doonaa inta lagu jiro hawlgalka. Looma isticmaali karo inay tahay waardiye hagitaan ah.